Ọzụzụ obe: nweta ume ma melite arụmọrụ gị - ULLER
Ọzụzụ obe: Nweta ike ma melite arụmọrụ gị
N'ihe banyere egwuregwu, ọ nweghị iwu zuru ụwa ọnụ nke ga-adabara ndị egwuregwu niile otu. Ọ bụrụ na ụfọdụ na-achọ ịzụ elu, ndị ọzọ nwere ike ilekwasị anya na ụdị ha ma ọ bụghị ịkpụzi ya ma nwekwaa ndị ọzọ họọrọ ime ọzụzụ ọzụzụ. Ma gịnị kpọmkwem ka ụdị ọzụzụ a nwere? Nọgidenụ na-agụ n'ihi na ebe a anyị na-agwa gị ihe ọ bụ na ihe bụ ụzọ kachasị mma iji mezuo ya iji rite uru ya niile.
Nnọọ ewu ewu na ndị ọkachamara egwuregwu, ọzụzụ ọzụzụ Ọ ghọwo otu n'ime usoro kachasị mma maka ndị chọrọ ịbawanye arụmọrụ nke anụ ahụ ha, nweta ike na olu, zere ma ọ bụ ọbụna gbakee site na mmerụ ahụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na ịme egwuregwu bụ agụụ gị, ọ nwere ike ịbụ na iji bụrụ ọnọdụ zuru oke, ị ga-atụkwasị anya na usoro egwuregwu ndị ọzọ na-akwadebe gị maka ụbọchị ndị dị mkpa, dị ka ụbọchị asọmpi.
Ọ bụ ihe nkịtị n'etiti ndị na-eme egwuregwu maka ọzụzụ ha iru otu isi na-ebelata uru. Kedu ihe nke a pụtara? na ọzụzụ gị adịzịzịghị arụ ọrụ dị pacenti 100% ebe ọ bụ na otu ụdị ihe ahụ emeela ahụ gị, n'ihi na ọ ghọtara ya dịka mmegharị oge. Ọ bụ ya mere mkpa ji dị mkpa iji mepụta mgbanwe na ọzụzụ nke ndị na-eme egwuregwu iji bulie ọnọdụ anụ ahụ ha yana n'ụzọ ụfọdụ, kpọtee akwara ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe kpatara ọzụzụ ọzụzụ abụghị naanị ụzọ iji kwadebe onwe gị ịsọ mpi n'egwuregwu gị, kamakwa iji kpochapụ, mepụta ihe, melite na ịdọ aka ná ntị gị yana nwee ọ practụ na-eme ndị ọzọ. Ma echegbula! Ọ bụ ezie na usoro a na-ewu ewu na ndị egwuregwu nwere ahụmahụ, ọ dịkwa mma maka ndị na-amalite.
A 'ọhịa kaadị' mode
Na-ekwu, na ọzụzụ ọzụzụ Ọ dabere na ịbụ 'usoro kaadị' ọhịa, ya bụ, ịdọ aka ná ntị a na-eme na egwuregwu egwuregwu gị.
Ntụziaka a ọzọ nwere ike ịdị iche iche, gụnyere ikuku dị ka igwu mmiri, ịgba ígwè, na ịgafe mba. Ọzọkwa ha omume anaerobic Ha nwere ebe ị na-azụ ọzụzụ dịka mmega ahụ siri ike na ebuli ibu n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Typesdị ụdị mmega ahụ jikọtara ọnụ ka ị nwee ike ime ka mgbatị gị baa ụba.
Na mgbakwunye na ịgbanahụ usoro ahụ ma ghara ịdaba na nkụda mmụọ, anyị ga-ekwusi ike na ụdị ọzụzụ a ga-abụ isi ihe nweta ume, Ebe ọ bụ na mgbe ị na-agbanwe ọzụzụ, ahụ ga-achọpụta na ọ ga-eme mgbalị ọhụrụ na mpaghara dị iche, si otú a na-ebute ihe na-akpali akpali. Mgbe ị hapụrụ mpaghara nkasi obi gị wee nwaa onwe gị n'ụzọ ndị ọzọ, nke na-abụghị nke ị na-emebu, a ga-amanye ahụ gị ịrụsi ọrụ ike iji zaghachi ihe ọhụụ ọhụrụ nke ọzụzụ a ga-enye ma mepụta mkpali nke onwe ya na ọ ga-akwalite ịgafe mgbochi ọhụrụ na ibi ọhụụ ọhụụ ọhụụ.
Ọzụzụ obe ga-emekwa ka ọ dị mfe iji zere mmerụ ahụ nwere ike ịdị, mana gịnị kpatara nke a? Ime otu mgbatị ahụ ogologo oge pụtara na ị na-eji otu akwara ahụ eme ihe mgbe niile, nke nwere ike ịtụgharị na mmerụ ahụ bara uru. Site n’ịzụ ụdị ọzụzụ ọhụrụ, ahụ gị, ọ bụ ezie na ọ gara n’ihu na-eji akwara ndị ahụ eme ihe, na-eme ya n’ụzọ ọhụrụ na nke dị iche, na-ebelata ohere nke ịta ahụhụ mmebi ọ bụla.
Kedu mgbe ị ga-amalite?
Mgbe ozi niile anyị gwara gị, ugbu a ị na-eche mgbe bụ ezigbo oge iji tinye ụdị ọzụzụ a na ndụ gị, azịza ya dịkwa mfe. Ọ ga-akachasị mma itinye ya mgbe ị na-amaliteghachi usoro egwuregwu gị, ebe ọ bụ na ịgwakọta ụdị ọzụzụ dị iche iche ga-eme ka usoro nke ịdị njikere maka asọmpi ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe ịbubigara ibu ókè, ebe ọ bụ na akwara gị ga-anọ oke, ma ị ga-eme onwe gị nnukwu ihu ọma site na-atụ anya mmerụ ọ bụla.
Dị ka ọ na-adị, ndị otu egwuregwu n’egwuregwu na-eji ya na mbido na ngwụcha nke oge ọ bụla, na-adaba n’oge ndị na-eme egwuregwu nọ n’ụdị kasị njọ na mgbe ike gwụrụ ha karị.
Uru nke ọzụzụ ọzụzụ
Ọzụzụ Cross na-agwakọta ọzụzụ egwuregwu dị iche iche dị ka ịgba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri, ịgba ọsọ na mba ndị ọzọ, onye nkuzi elliptical na igwe mgbatị ahụ na usoro ọzụzụ kwa ụbọchị. Mana, kedụ uru ọ bara maka ahụ anyị mgbe anyị na-agbanwe egwuregwu ndị a na usoro anyị na-eme kwa ụbọchị?
Gba ígwè: Uru nke ịgbanye ọzụzụ gị na ịgba ịnyịnya bụ na ị ga-enweta olu na-ebuteghị nkwonkwo gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnweta ike ọzọ na quadriceps na glutes, na-emepe nguzozi akwara ka mma-ọkpụkpụ dị ka ndị na-agba ọsọ ma na-agbazi ọnọdụ gị.
Igwu mmiri: Igwu mmiri ma ọ bụ ọrụ mmiri ọ bụla ọzọ, na mgbakwunye na inyere gị aka ịhapụ nrụgide, na-enyere aka ịmezi iku ume gị. Ọzọkwa, ọ na-ewusi ahụ ike dị ka ubu, pectorals, azụ, lats na ogwe aka, yabụ mgbe ị na-agba ọsọ gị ị ga-ahụ mmelite nke ọrịa strok mgbe ị na-agba ọsọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agabiga mmerụ ahụ, mmega ahụ mmiri dị mma maka mgbake ngwa ngwa site na iwusi ahụ dị ala ike.
Mgbatị: Ojiji nke dumbbells, igwe na igwe na-enyere aka ịzụlite ahụ dị elu ma ọ bụrụ na ị na-agabiga mmerụ ahụ, ọ bụ mmega ahụ dị ala nke na-enyere aka mee ka uru ahụ metụtara.
Cross mba skai: Ha bụ nzọ ụkwụ ọgba ọsọ ndị na-ahụ ski-mba ski ndị kasị mma cross ọzụzụ maka ha. N'ịbụ ndị na-achọsi ike, ọ na-eme ka ahụ dị elu ha dị elu mgbe niile na-enwe ihe egwu dị ala.
Obe ọzụzụ maka ndị ọgba ọsọ
Ọzụzụ ọzụzụ cross ga-abara onye ọ bụla na-eme ya uru. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e nwere ịdọ aka ná ntị anyị ga-egosi, nke ahụ ga-abụ nke ndị na-agba ọsọ.
Eleghị anya na-emegide nkwenkwe ndị mmadụ nwere, ọzụzụ ọzụzụ na-eweta abamuru kasịnụ ndị mbido ịgba ọsọ, Ebe ọ bụ na ngwakọta nke ọzụzụ na-erite uru nke mmelite nke aerobic ntachi obi na ikike akpa ume, na-eme ka arụ ọrụ ka mma.
Maka ọkachamara ọgba ọsọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ọzụzụ nke ga - eme ka enwee mmụba na mmegide aerobic nke a na - ahụkarị, dị ka ọ dị na mbụ, ọ nwere ike inyere ha aka na mpaghara ndị ọzọ dịka inweta ike, ọkachasị ndị na - enweghị ya.
Otu ihe atụ nke ụdị ọzụzụ a na-arụ ọrụ n'ezie bụ onye na-eme egwuregwu Luis Miguel Martín Berlanas, Onye na-agba ọsọ nke ihe mgbochi 3, nke dị ka ya onwe ya kwurula, n'ihi nhụjuanya ya site na ọrịa Haglund (ọkpụkpụ azụ nke ikiri ụkwụ) na ịwa ahụ anọ ya na mgbake ndị ọzọ, kwesịrị ịmalite ịtụle ọzụzụ ọzụzụ, nke mechara mechaa. , na-eji elliptical, ịnyịnya ígwè, na oge ụfọdụ, na-eme egwuregwu ndị na-agba ọsọ na mba, bụ nke doro anya na ọ bụ igodo iji nwetaghachi, ịmaliteghachi ọzụzụ ya na ịkwadebe maka asọmpi.
Maka Nzọ ụkwụ ọgba ọsọ, Ọzụzụ obe nwekwara ọtụtụ uru ma n'oge dị mkpirikpi ma ogologo oge yana ọkachasị mgbe ị na-eme ya na igwe. Ebe ọ bụ na nzọ ụkwụ na-eme na mpaghara ugwu ugwu ebe ị ga-agafe iyi na osimiri na nnukwu ịrịgo na ọdịda, ihe egwu nke mmerụ site na ajọ ọdịda ma ọ bụ site na ala na-enweghị oke dị elu. Maka nke a, mgbe ị na-azụ ọzụzụ maka asọmpi, iso igwe na-apụ bụ ezigbo ụzọ dị mma maka ndị egwuregwu a, ebe ha nọrọ ọtụtụ awa n'ugwu, mana oge a na igwe, ọzụzụ a nwere ike ịdị oke n'otu oge ahụ na a na-amụ ebe ahụ, mana na-enweghị ihe egwu nke ịta ahụhụ ọnya nzọ ụkwụ.
Pau Capell, Onye na-agba ọsọ nke kacha mma nke Ultra Trail nke Mont Blanc, bụ onye ọzọ so na ndị sonyeere ọzụzụ obe wee hụ na n'ime awa iri atọ ọ na-azụ kwa izu, 30% na-eme ya n'okpuru ụdị ọzụzụ a, na-eji igwe kwụ otu ebe. Na mgbakwunye, onye na-enye ya ọzụzụ bụ onye ofufe ọzụzụ obe, nke na-agba ya ume ịgbaso usoro a ma hụ na uru ya bara n'ezie.
Maka ebumnuche niile anyị nyere gị, egosiri na abamuru nke ọzụzụ obe pụtara ìhè, yana na mgbakwunye, enweghị ụdị mmega ahụ a, nke na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla na-eme egwuregwu mfe ịchọta nke kachasị mma. ya na mkpa ya., dị ka ndị ọkachamara a ma ama na-ekwu. Ma gị, ị na-anwa anwa ọzụzụ a?
Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ banyere Ọzụzụ Cross
Gịnị bụ ọzụzụ ọzụzụ?
Ọzụzụ Cross bụ usoro nke gụnyere ịgwakọta ọzụzụ egwuregwu dị iche iche, dịka ịgba ígwè, mgbatị ahụ, ịgba ọsọ na igwu mmiri, iji meziwanye ikike anụ ahụ.
Gịnị bụ uru nke ọzụzụ ọzụzụ?
Na-enyere aka igbochi mmerụ ahụ.
Ọ bụ usoro dị mma nke nwesịrị ịwagharị ma ọ bụ mmerụ ahụ.
Ọ na - enye aka ịbawanye ike nke onye na - eme egwuregwu.
Iku ume ọrụ na-abawanye.
Kedu ụdị ndị egwuregwu na-azụ ọzụzụ bara uru?
Trainingkụzi ọzụzụ bara uru maka ndị na-eme egwuregwu nke ọzụzụ niile, ebe ọ na-enyere ha aka imezi ahụ ha. Otú ọ dị, maka ndị na-eme egwuregwu dị ka ndị na-agba ọsọ na karịsịa ndị na-agba ọsọ ụkwụ, ọzụzụ ọzụzụ na-amasị ha karịsịa ma a bịa n'ịzere mmerụ ahụ mgbe ha na-akwadebe maka asọmpi.
Kedu mgbe bụ oge kwesịrị ekwesị iji gafere ụgbọ oloko?
Oge kachasị adaba iji zụlite ụdị ọzụzụ dị ka crossover bụ ọkachasị na mbido na ngwụcha asọmpi ahụ kemgbe nke mbụ, a na-amaliteghachi usoro ahụ na ahụ dị n'ụdị dị ala, na nke abụọ, n'ihi ọ bụ mgbe ahụ na-agwụ ike ma na-ebubiga ya oke, nke nwere ike ibute mmerụ dị iche iche.
Ọrịa Altitude, ihe niile ịchọrọ ịma tupu ị zụọ ọzụzụ n'ugwu
Nụla banyere ọrịa elu ugwu na mbụ? Ọ bụ aha mkparịta ụka na-enweta akara ngosi nke mgbaàmà anyị na-ata ahụhụ ozugbo anyị malitere ọzụzụ karịa mita 2400 n'ịdị elu. Nke ọma,
Zụọ uche gị ịgba ọsọ
Ọ dị gị ka ịgbachi obere olu ahụ n'isi gị, ebe ị na-achọ ịmecha usoro okirikiri gị, na ebe ọ bụla, ịchọrọ ịkwụsị, ọ dị gị ka ike gwụrụ gị na mberede
Nduzi mgbatị ụlọ dị ukwuu!
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu n'ụlọ, ka echiche gị fee, ma chịkwaa ahụ gị, wee gụọ ma chọpụta otu ọzụzụ dị ebube nwere ike ịbụ.